6 Sababood oo Gabadha ay uga tagto ninka ay jeceshahay (Qodobadaan ayaa sabab u ah) - Aayaha
Home/XIRIIRKA IYO GUURKA/6 Sababood oo Gabadha ay uga tagto ninka ay jeceshahay (Qodobadaan ayaa sabab u ah)
Waxaan halkaan idinkugu soo gudbineysaa 6 sababood oo haweenka ay uga tagaan ragga ay jecelyihiin.
Heegan uma ihid marka ay kuu baahantahay
Marka aadan diyaar ahayn xilliyada ay kuu baahantahay, waxaad siisay sabab ay ku aaminto inaadan jecleyn, haddii aadan diyaar u ahayn, waxaad bartay inay noolaato la’aantaa, ugu dambeyna way kaa tagaysaa.
Haweeney kasta waxay ninkeeda ka rabtaa inuu mudnaanteeda siiyo, isku haleyn ma dareemeyso hadii aadan siinin mudnaanteeda, wey kaa tageysaa hadaadan siinin mudanaanteeda.
U sheegidda beenta waa wadada ugu dhaqsiyaha badan ee aad ku disho kalsoonida, way ku cafin kartaa haddii aad mar been u sheegtid, balse marka ay dabeecad kaa noqoto, waxaa hubaal ah inay kaa dhaqaaqeyso, haweeney kasta waxay rabtaa nin ay aamini karto.
Waad mashquul badantahay
Haween farabadan ayaa raggii ay jeclaayeen uga tagay mashquulka ay had iyo jeer ku jiraan, marka aad mar dhif ah waqti la qaadatid adigoo mashquul ah, waxaad galisay shaki ah inaysan muhiim kuu ahayn.
Ma qiimeysid dadaalkeeda
Markii ay haweeney ay si dhab ah u jeceshahay nin, waxay isku dayeysaa wax kasta oo xiriirka uu ku shaqeynayo, waxay kaa fileysaa inaad ku qiimeysid dadaalkeeda yarkaa, hadii aysan dareemin in lagu qiimeeyay way kaa tageysaa xittaa haddii ay aad kuu jeceshahay.
Kalsooni kuma qabtid
Ninka kalsooni darrada badan dhibaato ayuu ku yahay haweenka, haweeney weyka tagi kartaa ninka ay jeceshahay haddii ay kalsooni darro ku jirto, waxay kaa rabtaa inaad ku kalsoonaatid oo aad aamintid, markii aad weydiisid boqolaal su’aal adigoo careysan ama wajiga kaduudaya, waxaad tustay inaadan ku kalsooneyn, aamin xaaskaaga.
5 Siyaabood Oo Go'aan Looga Gaaro Qofaad Jeceshahay Balse Si Xun Kuu Dhaawacay